Qaranka Latin Ameerika ′′ Chile ′′ Wuxuu Dalbanayaa Dib U Habaynta Dastuurka!!! | Hayaan News
Qaranka Latin Ameerika ′′ Chile ′′ Wuxuu Dalbanayaa Dib U Habaynta Dastuurka!!!
Chilean waxay i xasuusisay marxuum siyaasi cali khaliif galaydh-oo ku baaqay in dib loo furo dastuurka somaliland, ilaa neefsashadiisa.
Halkay dastuurka somaliland u ololeeyaan oo doorbidaan inay dastuurka somaliland xaqiijiyaan codka iyo isku xidhka dadkan.
Chilean waxay u codeeyeen in badan oo ka mid ah in la qoro dastuurka dalka uu qoray Augusto Pinochet ayaa hogaaminaya militariga Chile 17 sano oo xuquuqul insaanka ah iyo xadgudubyo joogto ah oo ka dhan ah Chileans.
Hadda Chileans waxay u codeeyeen inay u codeeyaan nolol joogto ah oo ka wanaagsan dalkooda oo dabaaldegyo wadooyin Santiago iyagoo heesaya, niikinaya iyo dab-dilaacyo.
Chileans waxay isku dayayaan inay xoqaan dastuurkii hore oo u muuqda mid argagax leh mana matalo dhamaan reer Chileans.
Labo arrin oo muhiim ah, marka hore in dastuurka dalka wax laga badalo, marka labaadna dastuur la qoro muwaadiniinta caadiga ah ee dalka-ka fogow in dastuurka laga dhigo mid kooxo gaar ah oo mudnaan leh.
Madaxweynaha hadda ee Chile Sebastian Penara ayaa soo dhaweeyay banaanbaxa iyo codka shacabka ee lagu dalbanayo isbedelka dastuurka.
Qaranka 18.73 millions wuxuu doonayaa in dib loo furo oo la qabsado dastuur aan qolo gaar ah u baahnayn.
Sikastaba ha ahaatee jamhuuriyada somaliland ma ka jawaabi doontaa wixii soo kordhiyay geeridii siyaasi cali khaliif galayd oo ku saleysan xuquuq iyo dastuur loo siman yahay dhamaan shacabka somaliland.
Siyasada geeska ee somaliland waxay aaminsanyihiin waxa ay latin American Nation of chile u dagaalamaan ama ay dalbanayaan inay dhacaan.
Siyaasiga hal abuurka leh ee aan lahayn olole rabshado wata ayaa cadaadis saaraya kuwa awooda abuuraya kacdoon balaaran oo badbaadiya dimuqraadiyad iyo cadaalad sinaan iyo qaran ahaan.
Su ‘ aashu waxay tahay siyaasi cali khaliif galaydh kabaha yaa la dulmaray oo ka shakiyay in dib u qorista dastuurka jamhuuriyadda somaliland 18.73 milyan oo chileans ah ay badbaadiyeen dalbashadooda ama dagaal siyaasadeed.
Siyaasi cali khaliif galaydh shaqo aad u fiican ayuu hayaa iyadoon lahayn maamul, xanibaad iyo casho toona.
Bal eeg waxa dunida ka dhaca oo raac suud wanaagsan iyo siyaasado wax soo saar leh oo dimuquraadiyadu ku dhisayso dal wanaagsan ama qaran.
TheChileans waxay si layaab leh u go ‘ aansadeen qadarkooda inay qaran ahaan uga tagaan dhaxal wanaagsan oo amaan ah jiilka soo socda.
Jamhuuriyadda Somaliland ma waxay dhagaysataa dastuurka geeska oo qancisa walaac iyo dalbasho?
Siyaasiga sare ee cali khaliif solicitors wuxuu ahaa mid aad loo fahmi karo oo lagu kalsoonaan karo jiritaanka somaliland.
Cidna uma qalanto in indhaha lagu jiido oo lagu bahdilo xukun xaqdaro ah iyo kaligii talis siyaasadeed.
Chileans gabi ahaanba waxay soo gabagabeeyeen isbedel aad u xoog badan oo ay ku doorteen qaab nololeedkooda-qaran ahaan.
Lkn shacabka somaliland waxay leeyihiin aqoon, adkaysi iyo u ololayn bilaa jirdil iyo isku filan.
Siyaasi cali khaliif galaydh wuxuu ahaa halgamaa siyaasadeed iyo hal-abuur indhaha ku haya runta iyo hadafka guud ahaanba.
Gudoomiyaha jaaliyada somaliland ee diblomaasiyiinta somaliland.